Khasaare naf iyo maalba leh ayaa Ka Dhashay Dab Qabsaday Xero Barakacayaal oo Ku Taalla Boosaaso. – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
By Liibaan Cabdi Caddow / July 15, 2020 July 15, 2020
Muqdisho:(SONNA)-Wararka aan ka helayno magaalada Boosaaso oo ah xarunta Gobolka Bari ayaa waxay sheegayaan in xero barakacayaal oo ku taalla xaafadda Baalade oo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada uu dab xoog leh qabsaday kaasoo sababay dhimashada 4-caruur ah.
Waxaa sidoo kale gubtay oo guryo badan oo au degenaayeen dadka barakacaasha ah ee xeradaas degenaa.
Dedaal badan oo ay sameeyeen maamulka degmada iyo bulshada barakacayaasha ah ee xeredaas ku dhaqan oo kaashanaya kooxda gurmadka iyo dab-demiska ayaa ku guulaystay in dabka la damiyo walow uu khasaaro badan gaystay.
Wariyaha Boosaso Bashiri Cumar Cali ayaa tagay goobta dabku ka kacay wuxuuna kadiyaariyay warbixin dhinacyo badan taabanaysa, isagoo noo sheegay in xaaladdu ay xiligan degen tahay caruurtii gubtayna loo diyaarinayo in la aaso.
Wariye Sakariye Khaliif Faarax